Child – Page7– Healthy Life Journal
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာ မိဘတွေအနေနဲ့ အထူးသတိ ထားဖို့လိုပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းစနစ်တွေက နုနယ်လွန်းတာကြောင့် ကလေးငယ်ကိုကျန်းမာပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ကြီးပြင်းလာအောင် သိထားသင့်တဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဆောင်ရန် (၁) မွေးကင်းစကလေးငယ် အိပ်စက်တဲ့အခါမှာ...
၀မ်းချုပ်တဲ့ ကလေးဝမ်းမှန်အောင် ဘယ်လိုကျွေးသင့်သလဲ . . .
မေး ။ ကလေးဝမ်းချုပ်ရင် ဝမ်းမှန်အောင် ဘာတွေကျွေးသင့်ပါသလဲရှင့်။ May Lay (Fb) ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ အဓိကကတော့ ကလေးဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုတာက အသီးအရွက်တွေကို မှန်မှန်မကျွေးလို့ပါ။ ကလေး ဝမ်းမှန်မှန်သွားအောင် အသီးအရွက်တွေကို...
ကလေးကို အသက်အရွယ်အလိုက် လိင်ကျန်းမာရေး ပညာပေးရအောင် . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်ကလေးကို လိင်ကျန်းမာရေးအကြောင်း ပညာပေးတော့မယ်ဆိုရင် အသက်အရွယ်အလိုက် သင့်တော်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပေးရပါမယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးတွေက လိင်ကိစ္စ (Sex) ထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ၊ ကလေးမွေးရတာ စတာတွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက...
ကလေးငယ် အရေပြားမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါပိုးများ
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (တာဝန်ခံဆရာဝန်၊ ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း) မေး. ကလေးတွေရဲ့ အရေပြားမှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးတွေကူးစက်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ကလေးလေးတွေမှာ အရေပြားပွန်းရှတာ၊ ကုတ်ဖဲ့တာ . . ဒီလိုနည်းတွေကတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးက ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးက ဝင်သွားပြီးတော့ ကလေးတွေမှာ...
အကြောဆွဲနေတဲ့ ၁၀ တန်းကျောင်းသူလေး
ပါမောက္ခဒေါက်တာဉာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) “သမီးလေး ဝင့်ဝါ . . ဒီနှစ် ၁၀တန်းဆိုတော့ စာကိုသေချာကြိုးစားရမယ်နော်၊ ၁၀တန်းဆိုတာ လူ့လောကမှာ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပဲ သမီး၊ ခပ်ပေါ့ပေါ့နေလို့ မရဘူး၊ အချိန်နဲ့အမျှ စာနဲ့မျက်နှာ မခွာတမ်းကျက်ဖို့လိုတယ်” ဝင့်ဝါ ၉တန်းအောင်တာနဲ့ မိဘတွေက...
ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး။ ။ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ လက်ဖျံရိုးကျိုး ခြင်းအကြောင်းကို သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ။ ။ ကလေးတွေက အရိုးကျိုးတာက အဖြစ်များပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဖြစ်များတဲ့ အရိုးကျိုးတာကို သစ်စိမ်းချိုးကျိုးခြင်း(Green- stick Fracture)လို့ ခေါ်ပါတယ်။...
သင့်ကလေးကို ပြောပြသင့်သော စကား ၁၀ ခွန်း
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်နေ့ တစ်နေ့ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေးကို ပြောပြရတဲ့စကားတွေ အများကြီးရှိမှာပါ။ အဲဒီအထဲက ကလေးကို ပိုမိုလိမ္မာရေးခြားရှိပြီး ပိုမိုထက်မြက်ဉာဏ်ကောင်းကာ ယုံကြည်မှုရှိစေမယ့် စကား ၁၀ ခွန်းကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းပြောသင့်ပါတယ်။ (၁) သား/သမီး...
ကလေးများတွင် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို မိဘတို့ဖြေရှင်းရမည့်အချက်များ
၊ အေးမို့မို့ဇော် ၊ ကလေးများတွင် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိခြင်းသည် မိဘများဘက်မှ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှု အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဌေးဌေး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ – ကလေးတွေ ဘာကြောင့်အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါက်ကွဲကြတာလဲ။ ကလေးတွေက များသောအားဖြင့် အိမ်မှာဆိုရင် မိဘတွေက...
ကလေး အသက် ၁၀ လနဲ့ ၁၂ လအရွယ်မှာဘာတွေ ကျွေးရမလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကလေးအသက် ၁၀ လအရွယ်မှာ ကလေးတွေ အသက် ၁၀လထဲရောက်သွားပြီဆိုရင် ကျွေးတဲ့ ဆန်ပြုတ်ကို ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးဖြစ် အောင် ဇွန်းနဲ့ခြေပြီး ကျွေးပါ။ ဒီအချိန်မှာ မွှေစက် (Blender)နဲ့ မကြိတ်ပါနဲ့တော့။ ထမင်းပျော့ပျော့ကို ဇွန်းနဲ့ ခြေပြီး...
ကလေးများ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ် ပုံမှန်ရရှိစေရန်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးတွေမှာ ပုံမှန်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ကိုရရှိမှ အရိုးတွေ သန်စွမ်းကျန်းမာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ – နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း ကလေးတွေ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ် ရရှိဖို့ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို များများတိုက်ကျွေးပါ၊ နွားနို့ကို အဓိကတိုက်ပါ။ ကလေးဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက...